Oganda: Fikorontanana tamin’ny oram-pifaliana (Happy Hour), sy resaka hafa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jolay 2018 20:19 GMT
Niteraka adihevitra tamin'ity herinandro ity ilay Ogandey bilaogera sady mpanakanto hip-hop Saving a Generation Endangered (S.A.G.E.) raha namelively izy tao amin'ny fanatrehana ny Bloggers Happy Hour (BHH) ao Ogandà nandritra ny antsafa Blogging a Blogger notarihan'ny Country Boyi:
Namely bebe kokoa tao amin'ny fangon'ny Blogger Happy Hour izy (S.A.G.E.) izay mamaritra ireo bilaogera Ogandey ho “marani-tsaina, manam-panahy, sexy sy mahatsikaiky indraindray.” Mahita famaritana hafa ho an'ny sehatra famahanam-bilaogy Ogandey izy.
“Hantsoiko fotsiny hoe teathran'ny hevi-dravina izany,” hoy izy, “satria ireo bilaogera “tsara indrindra” ireo ihany no nametraka ny tenany ho andriamanibavy sy andriamanidahy – ny sampy izay ivavahany. Tsy tiany hisy olona hanao tsikera mivaivay momba ireo andriamanibavy/andriamanitra ireo, ny fototr'izany rehetra izano no hevi-dravina! “
Haingana avy hatrany ireo bilaogera namaly, na tamin'ny fanehoan-kevitra na tamin'ny bilaoginy ihany. Avy amin'i Dennis Matanda:
Fantatro tsara fa ilaina ny misokatra sy mivantana -saingy somary hevi-dravina (tsy misy dikany) ny manimba ny klioba izay natsanganao. Tao aho tamin'ny BHH voalohany ary mikasa hanohy foana …
Somary nalemy fanahy tamin'ny fihetsiny i Magoola, izay naka endrika taratasy tao amin'ny S.A.G.E.:
Tsy azoko antoka izay niditra taminao, saingy tsy mahafinaritra ny fampielezana ny tsy fahalalanao ao amin'ny bilaogin'ny Country Boy. Tsy vitan'ny hoe novitaina tanteraka, fa maharikoriko.
Tena famindrampo amin'ny tena tokoa ny ny famahanam-bilaogy ka tsy tokony hampiseho fanehoan-kevitra tahaka izany momba azy ianao. Ankoatra ny tatatata rehetra nataonao, inona no nataonao tamin'ireo ao amin'ny Blogger Happy Hours natao tao anaty bar?
Niaro an'i BHH i Cheri:
Izany no antony antsoina izany hoe blogger happy hour (ora fifalian'ny bilaogera). Mandeha any izy ireo mba hihaona amin'ny olona tsara fanahy, mahira-tsaina, sexy sy mahatsikaiky. Ireo olona izay hipetraka sy hihomehy amin'ny hariva. Jereo, manao izany indray mandeha isam-bolana izy ireo. Mila atao karazana kaonferansa ve izany. Moa ve isika mila miady hevitra momba ny politika manerantany? Antsoina hoe ora falifaly izany satria te handehandeha mba hiresaka fotsiny isika. Fa tsy mitondra finday an-tsofina sy manao fifanarahana mitady fandriampahalemana.
Nahavita nahita mpanohana tao amin'i Phantom i S.A.G.E, izay naneho hevitra tamin'ny lahatsoratr'i Cheri:
Mamaky ny blaogin'i SAGE aho ary maneso ny sasany amin'ireo zavatra lazainy. Fa mahita mahasoa ihany koa aho.
Tsy resahana intsony ny korontana amin'ny bilaogera, mitondra an'i S.A.G.E. sy ny BHH i Ivan no sady mibilaogy mivantana ny Ugandan Blogumentary, sarimihetsika fohy novokarin'ny mpianatra Danoà efatra tonga teto Ogandà tamin'ny volana Aprily:
Jereo Sage, sy Dee… ary Rev mamerina ny Nokia izany… ary diso fijery amin'ireo mpihazona labozia. Naman-dratsy, RATSY !!
Tompokolahy sy tompokovavy: Happy Hour !!
Bilaogera mpila ravinahitra Kelly manintona ny saina momba ny lahatsary fanadihadiana iray hafa navoaka vao haingana:
Nanao fampisehoana antsoina hoe “Miverina any Oganda” izy ireo omaly. Nanasongadina tanora mpanao gazety Kanadianina / Indiana (tsara tarehy mahagaga) izany izay noroahan'i Adi Amin hiala tao Oganda ny ray aman-dreniny fony izy mbola zaza niverina tany amin'ny tranom-pianakaviana ary nijery ny fifandraisana ara-poko sy ara-politika teo amin'ireo Ogandey Aziatika sy ny Ogandey Mainty. Raha liana momba an'i Oganda ianao dia tsy dia misy dikany manokana izany. Tezitra mafy i Paul nahita izany, indrindra rehefa nohadihadiana ny zanaka lahin'i Idan Amin, Taban Amin. Nampirotsaka ny ranomasoko izany mba hahita ireo fikomiana mahery vaika vao haingana tamin'ny fahitalavitra. Nalaina taorian'ny korontana Mabira Forest tao Kampala, sambany aho no nahita horonantsary ahitana mpanao fihetsiketsehana anti-Aziatika tamin'ny fihetsiketsehana, nandoro fiara ary nidaroka Indiana. Lasa adala mieritreritra fa i Kampala keliko izany. Azonao atao ny mijery ny fandaharana manokana ao amin'ny Youtube.
Ary i Iwaya no nanakatona ny herinandro tamin'ny fanomezam-boninahitra an'i Sam Cooke:
Vonoy io telefonina io. Avelao ny ridao hianjera na hatsipazo! Omeo ahy ity zava-pisotro ity. Eh, esory ny kiraronao ary avelao ny tongotrao haka rivotra. Tsy voatery hanaraka harifenitra rehefa eto. Ao an-trano ny Cooke. Nihaino an'i Cooke aho hatramin'ny niandohan'ity herinandro ity. Nifalifaly aho, nisotro, nandrevirevy sy nipetraka ary avy eo nitsambikina sy nidradradradra tamin'ny feo madio fatratra, manankarena fatratra, tena isan-karazany, tena mahafinaritra, saika tsy nino aho fa mila fotoana ela tahaka izao ny mihaino an'i Cooke.